आठ वर्षका यी ‘टावर ब्वार्इ’ काे उचार्इ देखेर छक्क नपर्नु हाेला ! – Nepal Journal
आठ वर्षका यी ‘टावर ब्वार्इ’ काे उचार्इ देखेर छक्क नपर्नु हाेला !
Posted By: Nepal Journal June 16, 2017 | २ असार २०७४, शुक्रबार १४:०९
भारत उत्तर प्रदेश मेरठका करण सिंह आठ वर्षका भए तर उनको अस्वभाविक उचाईका कारण कसैले पनि उनको वास्तविक उमेर पत्याउँदैनन् ।
आठ वर्षको उमेरमा करणको उचाई ६ फिट ६ इन्च छ । उनका सबै दौतरीहरु उनलाई ‘टावर ब्वार्इ’ उपनामले बोलाउँछन् । श्वेतलना सिंह र सञ्जय सिंहको कोखमा जन्मिएका करण पाँच वर्षको हुँदा विश्वको सबै भन्दा अग्लो र गरौँ बालकको रुपमा दरिएका थिए ।
गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डले ५ वर्ष कै उमेरमा करणलाई विश्वको सबै भन्दा अग्लो र गह्राैं बालकको प्रमाण–पत्र दिएको थियो । त्यतीबेला करणको उचाई ५ फिट ७ इन्च र तौल पनि धेरै थियो ।
करण सिंहलाई पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुले विश्व कै अग्ला आठ वर्षीय बालकका रुपमा प्रचार गरेका छन् ।
तर करणको उचाई र तौल विश्व कै एक मात्र हो की होइन भनि प्रमाणित भने भएको छैन ।
करणको उचाई र तौललाई लिएर उनका आमा बुबा चिन्तित छन । तर चिकित्सकले बारम्बार करण पूर्ण रुपमा स्वस्थ भएको बताएका छन् । आमा बाबुको उचाई पनि औषत भन्दा धेरै भएकाले करणको उचाई वंशानुगत रुपले बढेको चिकित्सकले बताएका छन ।
करणकाे बास्केट बल खेलप्रति धेरै नै लगाव रहेकाे छ । उनले भविष्यमा साेही खेलमा केही गर्ने बताएका छन् ।
Be the first to comment on "आठ वर्षका यी ‘टावर ब्वार्इ’ काे उचार्इ देखेर छक्क नपर्नु हाेला !"